Tababaraha Man United Ee Jose Mourinho Oo Kooxdiisa U Sheegay Halka Wado Ee Lagu Joojin Karo Man City – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Tababaraha Man United Ee Jose Mourinho Oo Kooxdiisa U Sheegay Halka Wado Ee Lagu Joojin Karo Man City
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday qaabka ay Man United dhigeeda Man city uga joojin karto in ay ku guulaysato horyaalka premier league sanadaha soo socda.
Jose Mourinho ayaa qirtay in hadii ay Man city sii wado sida ay haatan lacagta u galinayso suuqa in ay madaxa ka haysan doonto Kubada England sanadaha soo socda.
Mourinho ayaa xiddigaha Kooxdiisa u sheegay in ay koraan hadii ay doonayaan in ay la tartamaan kooxda ay jaarka yihiin ee Man city.
Kadib markii ay United sida lama filaanka ah uga hadhay Champions league tababaraha Man United ee Jose Mourinho ayaa 12 daqiiqo isku difaacay.
Mourinhho ayaa sheegay in xiddigihii uu Pep Guardiola ugu yimid Man city in ay ka fiican yihiin xiddigihii uu isagu ugu yimid Man United isaga oo sheegay in 286-kii uu Guardiola galiyay suuqa in ay kaliya ahayd xoojin boosaska qaar ah.
“Hadii ay kooxuhu ka fiican yihiin sida aanu anagu nahay, hadii ay joojiyaan lacagta ay suuqa galinayaan United-na sii wado in ay suuqa lacag galiso, kaliya maaha lacagta suuqa la galiyo laakiin wakhtiga iyo macluumaadka, waxa aanu nahay qaar isku awood ah, laakiin hadii ay sii wadaan lacagta ay suuqa galinayaan si nala mid ah ama naga badan way adagtahay in aan la tartano”.
“Waanu isku dayi doonaa laakiin runta ayaa ah in ay kooxaha qaar diyaar u ahaayeen in ay koobab ku guulaystaan halka ayna qaar kalena diyaar u ahayn, hal koox waxa ay u baahantahay in ay bilowdo koobabka halka qaar kale loo baahan yahay in la dhiso”.